747-8F Miala rehefa miasa?
fanontaniana 747-8F Miala rehefa miasa?
8 volana 1 andro lasa izay #1313 by TheFinnishDude
Ho an'ny antony sasany, ny 747 dia mihetsika rehefa mandeha milina. Iza no mahalala ny antony?
7 volana 4 andro lasa izay #1348 by Gh0stRider203
fanontaniana manjombona fa ny fiara mijanona amin'ny parking
7 volana 3 andro lasa izay - 7 volana 3 andro lasa izay #1350 by TheFinnishDude
Eny, tapaka voatapaka. Mijanona tsy mihetsika aloha izy rehefa manomboka ny milina. Ny tena mahavariana, ny ampahany ratsy indrindra dia ny fotoana hilalaovan'ny AirHauler, dia manosika ilay fiaramanidina havanana eo anoloan'ny trano iray. Na alohan'ny ahazoako fahafahana hanombohana dia manosika azy ho akaiky ny fananganana sy miteraka loza ... ¯ \_ _ (ツ) _ / ¯
Fanovana farany: 7 volana 3 andro lasa izay by TheFinnishDude.